Firenena marobe tafiditra indray amin'ny valan'aretina Covid, nampitandrina ny WHO fa mety mihoatra ny tranga 300 tapitrisa amin'ny 2022
avy amin'ny admin tamin'ny 21-08-17
Nampitandrina ny 11th ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana fa raha mitohy mivoatra ny valanaretina mifanaraka amin'ny fironana ankehitriny, amin'ny fiandohan'ny taona manaraka, dia mety mihoatra ny 300 tapitrisa ny isan'ireo tranga pneumonia coronazy vaovao manerantany. Ny talen'ny jeneralin'ny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dia nilaza fa ny WHO dia p ...
Tonga haingana ny Virus Delta Covid-19, ny fihenan'ny toekaren'i Azia atsimo atsinanana
Tamin'ny Oktobra 2020, sambany no nahitana an'i Delta tany India, izay nitarika mivantana ny onja faharoa tamin'ny valanaretina lehibe tany India. Ity aretina ity dia tsy vitan'ny hoe mamindra be fotsiny, averina haingana ao amin'ny vatana, ary elaela lasa ratsy, fa ny olona voan'ny aretina ihany koa dia mety hivoatra ...
Nihamafy ny valanaretina tany Azia atsimo atsinanana, ary orinasa Japoney maro no nakatona
avy amin'ny admin tamin'ny 21-08-02
Miaraka amin'ny fanamafisana ny valanaretina pnemonia satro-boninahitra vaovao any amin'ny firenena maro any Azia atsimo atsinanana, orinasa maro izay nanokatra orinasa tao no voadona mafy. Anisan'izany ny orinasa japoney toa ny Toyota sy ny Honda voatery nampiato ny famokarana, ary io fampiatoana io dia ...
Ny heterogeneity Immunoassay sy ny fiantraikany amin'ny serosurveillance SARS-CoV-2
Serosurveillance dia mifandraika amin'ny fanombanana ny fihanaky ny antibodies amin'ny mponina iray manohitra ny pathogen manokana. Manampy amin'ny fandrefesana ny tsimatimanota aorian'ny fihanaky ny aretina na ny fanaovana vaksiny ary manana fihenan'ny epidemiolojika amin'ny fandrefesana ireo loza ateraky ny fifindrana sy ny tahan'ny fiarovana ny isan'ny mponina. Ao amin'ny cur ...
COVID-19: Ahoana no fiasan'ny vaksinin'ny viriosy viral?
Tsy toy ny vaksinina maro hafa izay misy pathogen areti-mifindra na ampahany aminy, ny vaksinin'ny viriosy viral dia mampiasa virus tsy mampidi-doza mba hanaterana sombin-kaody génétique ao amin'ny selantsika, ahafahan'izy ireo manao proteinina pathogen. Io dia mampiofana ny hery fiarovantsika hihetsika amin'ny aretina amin'ny ho avy. Rehefa manana bac ...
COVID-19 dia manasongadina ny filana maika hamerenana ny ezaka manerantany hamaranana ny tioberkilaozy
Vinavinaina ho 1,4 tapitrisa no vitsy ny olona nikarakara tuberkulosis (TB) tamin'ny taona 2020 noho ny tamin'ny taona 2019, raha ny angom-baovao vonjimaika izay namboarin'ny World Health Organization (WHO) avy amin'ny firenena 80 mahery- fihenan'ny 21% tamin'ny taona 2019. Ireo firenena manana ny lehibe indrindra banga mifandraika amin'izany dia Indonezia (42%), Ka ...